I-Highlands4you isitatimende sobumfihlo
Ibhalwe on 01 November 2009 . Kuthunyelwe ku Isingeniso
highlands4you.co.uk (Zonke i-Seasons) uzibophezele ekulondolozeni kwakho
ubumfihlo ku-intanethi. Sicela ufunde inqubomgomo elandelayo ukuqonda ukuthi ulwazi lwakho lomuntu siqu luzophathwa kanjani uma usebenzisa ngokugcwele i-www.alltheseasons.net. Le nqubomgomo ingashintsha ngezikhathi ezithile ngakho sicela ubuyekeze ngezikhathi ezithile.
Le nqubomgomo izokwazisa:
Yiluphi ulwazi olubonakalayo oluqoqwe kuwe
Yiziphi amakhukhi nokuthi zisetshenziswa kanjani
Ukwaziswa kwakho kanjani
Ubani oqoqa ulwazi lwakho
Okwaziswa kwakho kungabelwa nobani
Yikuphi ukukhetha okukhona kuwe mayelana nokuqoqwa, ukusetshenziswa nokusabalalisa kolwazi lwakho
Ukhetho luqoqa ulwazi ngezindlela eziningana kusuka ezingxenyeni ezahlukene zewebhu lethu.
Olunye ulwazi lomuntu siqu lubuthana uma ubhalisa. Ngesikhathi sokubhalisa, sicela igama lakho nekheli le-imeyili. Uhlelo luzocela futhi ikheli lakho lomgwaqo, idolobha, isifundazwe / isifundazwe, i-zip / ikhodi yeposi, izwe, inombolo yocingo, ne-URL yesayithi lakho lewebhu, nakuba yizinkambu kuphela eziphawulwe nge-asterisk (*) ensimini yokubhalisa kudingeka. Lolu lwazi lusetshenziselwa kuphela ukukusiza ekuhambeni kwesistimu ngokugcwalisa ngokuzenzekelayo amafomu athile (njengokufaka ifomu lokuthumela uhlu) ngolwazi lwakho ukuze kungadingeki ukuba ungene kabusha njalo. Uma ubhalisa awusayiwaziwa ku-All The Seasons - unegama lomsebenzisi futhi uyakwazi ukuzuza ngokugcwele ngeminikelo eminingi yokukhethwa.
Ngaphezu kokubhalisa singase sikubuze ulwazi lomuntu siqu ngezinye izikhathi, kufaka phakathi (kodwa kungagcini) lapho ubeka uhlu noma usebenzise ezinye izici zoKhetho. Uma uxhumane nathi, singagcina irekhodi lalezo zincwadi. Wonke amakhasi ngaphakathi kokukhethwa kuhlanganisa ukuxhumanisa kule Nqubomgomo Yobumfihlo.
Njengengxenye yokunikela nokuhlinzekela ngezinsizakalo ezenziwe ngezifiso futhi ezenziwe ngezifiso, ukukhethwa kungasebenzisa amakhukhi ukugcina futhi ngezinye izikhathi ukulandelela ulwazi ngawe. Ikhukhi yinto encane yedatha ethunyelwe kusiphequluli sakho kusuka kwiseva yewebhu futhi igcinwe kwi-hard drive yedokhumenti yakho. Izici eziningana zokukhethwa zidinga ukuba wamukele amakhukhi ukuze usebenze kahle.
Ngokuvamile, sisebenzisa amakhukhi ngezinhloso ezilandelayo:
(1) Ukuthola bese ubhala zonke izinhlu "ezintsha" kusukela ekuvakasheni kwakho kokugcina kusayithi.
(2) Ngokuzenzekelayo ukuze ulondoloze unomphela iphasiwedi yakho kukhompyutheni yakho ngakho akudingeki ukuyifaka njalo ngesikhathi uvakashela isayithi lethu.
(3) Ukukuvumela ukuba "uhlu lokuhlola uphinde uqhathanise" uhlu oluthandayo lokumaka ukuthola nokubuka esikhathini esizayo.
Amanethiwekhi wokukhangisa abasebenzisa ukufakwa ohlwini ku-Ukukhethwa angasebenzisa amakhukhi abo.
Ukukhethwa kungase futhi kuqoqe ukuphathwa kwesistimu nokubika ulwazi oluhlangene kubakhangisi bethu.
Umgomo oyinhloko Wokukhethwa ekuqoqeni ulwazi lomuntu siqu ukukunikeza, umsebenzisi, ngolwazi oluhlelekile futhi usize ukuhamba kwakho kulo lonke ukhetho.
Uma ubuzwa ulwazi lomuntu siqu kuKhetho, ukwabelana ngalolo lwazi ngoKhetho kuphela, ngaphandle uma kuchazwe ngokuqondile. Noma kunjalo, ezinye izenzo zizokwenza ukuthi ulwazi lwakho lomuntu luvezwe kwabanye abasebenzisi bokuKhethwa, ngokwabo. Isibonelo, uma ufaka ulwazi lomuntu siqu kwifomu lokuthumela uhlu, lolu lwazi luzofakwa ngokufaka kuhlu lwakho, ngaphandle uma kuchazwe ngokunye.
Njengomthetho jikelele, Zonke I-Seasons ngeke zidalulwe noma yiluphi olunye ulwazi lwakho olubonakalayo ngaphandle uma sinemvume yakho noma ngaphansi kwezimo ezikhethekile, njengalapho sikholwa ukuthi sinokholo lokuthi umthetho udinga noma ngaphansi kwezimo ezichazwe ngezansi. Sicela ubone imigomo yesevisi noma ukusebenzisa izivumelwano zomkhiqizo ngamunye nezinsizakalo ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa mayelana nokuthi ulwazi lwakho lomuntu siqu lungabelwa kanjani.
Zonke i-Seasons zingase zidalulwe ulwazi lwe-akhawunti ezimweni ezikhethekile uma sinesizathu sokukholelwa ukuthi ukudalula lolu lwazi kuyadingeka ukukhomba, uxhumane noma ulethe isenzo somthetho kumuntu ongase aphule imigomo yesevisi ye-All The Seasons noma angabangela ukulimala ukungena noma ukuphazanyiswa (noma ngenhloso noma ngokungenhloso) amalungelo noma impahla ye-All The Seasons, abanye abasebenzisi be-All The Seasons, noma omunye umuntu ongalimazwa yimisebenzi enjalo. Yonke i-Seasons ingabonisa noma ifinyelele ulwazi lwe-akhawunti uma sikholwa ngokukholwa ukuthi umthetho uyayidinga kanye nokuphatha nezinye izinhloso esizibalulekile ukuthi sizilondoloze, sisebenze, futhi sithuthukise imikhiqizo namasevisi ethu.
Uma ukhetha ukungabhalisi noma ukuhlinzeka ngolwazi lomuntu siqu, usengasebenzisa iningi lokuKhetha, kepha ngeke ukwazi ukufinyelela izindawo noma ukusebenzisa izici ezidinga ukubhaliswa.
Ubuye ukhethe ngokuqondene nama-cookies. Ngokuguqula izintandokazi zakho zesiphequluli, unelungelo lokukwamukela wonke amakhukhi, ukwaziswa uma i-cookie isethiwe, noma ukwenqaba wonke amakhukhi. Uma ukhetha ukwenqaba wonke amakhukhi ngeke ukwazi ukusebenzisa lezo zinsizakalo zoKhetho oludinga ukubhaliswa ukuze ubambe iqhaza. Lezi zinsizakalo zibandakanya ukuhlonza uhlu olusha oluthunyelwe kusukela ekuvakasheni kwakho kokugcina, ukugcwalisa okuzenzakalelayo kwefomu lokungena, kanye nesici sokufanisa Shopper. Usengasebenzisa okuningi kwezici zoKhetho ngisho noma ungamukeli amakhukhi.
I-All The Seasons ayithengisi noma ayiqashise ulwazi lomsebenzisi kunoma ubani. Sizokukwazisa ngesikhathi sokuqoqwa kwedatha noma ukudluliswa uma imininingwane yakho izokwabelana nomuntu wesithathu futhi uzohlala unenketho yokungavumeli ukudluliswa. Uma ungafisi ukuvumela idatha yakho ukuba yabelwe, ungakhetha ukungasebenzisi isevisi ethile.
Ungafinyelela kanjani, ubuyekeze noma ususe ulwazi lwakho
Sizokunikeza izindlela zokuqinisekisa ukuthi ulwazi lwakho lomuntu luqondile futhi lwanamuhla. Ungakwazi ukuhlela noma ukususa iphrofayela yakho yomsebenzisi nganoma yisiphi isikhathi ngokuchofoza isixhumanisi se- "Iphrofayela yami" noma umdwebo ohlinzekwa wuhlelo uma ungene ngemvume. Uma usuvele ungene ohlelweni phakathi neseshini enikeziwe, nomaphi lapho uya khona ekukhethweni , ulwazi lwakho luzohlala nawe kuze kube yilapho ungakachofoza "isixhumanisi" se-"Logoff", esitholakala ngaphakathi kwesikrini "sePhrofayela yami".
Uma ungumsebenzisi obhalisiwe ngaphambilini futhi ulahlekile noma ukhohliwe iphasiwedi yakho, ungayithola nge-imeyili ngokusebenzisa isici sethu esithi "Ukhohlwe Iphasiwedi". Chofoza inkinobho kunoma yiliphi ikhasi lokungena ngemvume ukuze ucele ukuthi iphasiwedi yakho ithunyelwe nge-imeyili kuwe. Asikwazi ukunikeza iphasiwedi yakho nganoma iyiphi enye indlela.
I-akhawunti yakho yokukhetha ingasuswa, kodwa ukwenza kanjalo kuyoholela ekubeni ungakwazi ukufinyelela noma yiziphi izici zohlelo oludinga ukubhaliswa komsebenzisi.
Uhlobo lwezinyathelo zokuphepha ezikhona ukuvikela ukulahlekelwa, ukusetshenziswa kabi, noma ukuguqulwa kolwazi lwakho
Okunye ngaphandle komlawuli weKhetho noma omunye umsebenzi ogunyaziwe we-All The Seasons, nguwe kuphela umuntu onokuthola ulwazi lwakho lomuntu siqu. Ukubhaliswa komsebenzisi kuvikelwe iphasiwedi ukuvimbela ukufinyelela okungagunyaziwe.
Sincoma ukuthi ungahlukanisi iphasiwedi yakho kunoma ubani. Zonke i-Seasons ngeke zikucele iphasiwedi yakho efonini engacelwe noma e-imeyili engacelwe. Njengokuvikeleka okungeziwe kokuphepha, ungase ufune ukungena ngemvume uma usuqedile iseshini ekukhethweni. Lokhu ukuqinisekisa ukuthi abanye abakwazi ukufinyelela ulwazi lwakho lomuntu siqu kanye nokuxhumana uma wabelana ngekhompyutha nomunye umuntu noma usebenzisa ikhompyutha endaweni yomphakathi njengelabhulali noma i-Internet cafe.
Ngeshwa, akukho ukudluliswa kwedatha phezu kwe-Inthanethi kungaqinisekiswa ukuthi i-100% ivikelekile. Ngenxa yalokho, ngenkathi silwela ukuvikela ulwazi lwakho lomuntu siqu, i-All The Seasons ayikwazi ukuqinisekisa noma ukuqinisekisa ukuphepha kwanoma yiluphi ulwazi olusithumela kithi noma kusukela ezinsizakalweni zethu ze-intanethi, futhi wenza kanjalo engozini yakho. Uma sithola ukuthunyelwa kwakho, senza umzamo wethu omkhulu ukuqinisekisa ukuphepha kwawo kumasistimu ethu.
Yeka ukuthi Zonke Izinkathi Zivikela kanjani ubumfihlo bezingane
Yonke i-The Seasons iyisayithi lezethameli ezijwayelekile. Izingane kufanele zicele njalo umzali imvume ngaphambi kokuthumela imininingwane yomuntu kunoma ubani ku-intanethi. Yonke i-The Seasons ayihlanganyeli ngolwazi lomuntu siqu ngabasebenzisi abangaphansi kweminyaka engu-13 nabangaphandle futhi asithengisi noma siqasha ulwazi lomuntu siqu mayelana nabasebenzisi bethu, kungakhathaliseki ubudala. Ngokungeziwe, i-All The Seasons ngeke ithumele noma iyiphi i-imeyili ehlinzeka ngokuqondile kubasebenzisi abonisa ukuthi bangaphansi kweminyaka engu-13.
Yini enye okufanele uyenze mayelana nobumfihlo bakho obuku-intanethi
Sicela uhlale ukhumbule ukuthi noma nini lapho uzinikela ngokuzithandela ulwazi lomuntu siqu ku-intanethi - isibonelo ohlwini oluthumela ngalo noma ngokusebenzisa i-imeyili - leyo ngwazi ingaqoqwa futhi isetshenziswe abanye. Ngamafuphi, uma uthumela ulwazi lomuntu siqu ku-inthanethi olutholakala emphakathini, ungathola imilayezo engaceliwe evela kwamanye amaqembu ngokubuyisela.
Ekugcineni, unesibopho kuphela sokugcina izimfihlo zamaphasiwedi wakho kanye / noma yimuphi ulwazi lwe-akhawunti. Sicela uqaphele futhi unesibopho noma kunini uma uxhumekile ku-intanethi.